Shiinaha Xiisadda Tayada Sare Polymer Cayrinta Qalab-sameeyaha Soo-saare iyo Soo-saare | Histe
Tilmaamaha alaabta iyo faa'iidooyinka
1.Kaabiyaha xoojiyaha caaga ah ee silsiladda waa mid siman oo is haysta
Waxqabadka hydrophobic ee saxda ah, iska caabin wanaagsan oo gabowga, raadinta iyo nabaad guurka.
3. Udhiska adag ee u adkaysta usiidka FRP wuxuu xaqiijiyaa isku halaynta insulatorka isku dhafan.
4. Giraanta corona giraanta ayaa si fiican u qaybisa aagga korantada iyada oo la adeegsanayo faaska insulatorka si looga hortago ifafaalaha corona oo looga ilaaliyo insulatorka waxyeellada weyn ee dhamaadka dhamaadka isweydaarsiga haddii ay dhacdo dhalaal.
5.Firtirka dhamaadka iyo usha FRP waxay kuxiranyihiin qalabka loo yaqaan 'crimping end-fitting fit crimping end', waxay hubisaa waxqabadka sheyga sheyga.
Qaab-dhismeedka shaabad ku habboon dhammaadka gaarka ahi wuxuu hagaajiyaa isku halaynta xiritaanka sheyga.
Tallaabooyinka adag ee kormeerka waxay hubinayaan tayada ugu fiican ee shey kasta.
8.Waxaan qaabeyn karnaa oo soo saari karnaa iyadoo loo eegayo sawirada iyo shuruudaha macaamiisha oo faahfaahsan.
Magaca badeecada Alaabta
Isku-darka iskudhafka Insulator FSW-35/100 35 100 650 450 1015 230 95
Hore: Ilaalinta Sare silikoon Rubber Post Composite Insulator
Xiga: Tayada Sare danab High Go'doon
(1) Hubinta Tayada
Waxaan leenahay habka xakamaynta tayada adag ee alaabta ceeriin ilaa alaabooyinka la dhammeeyay. Shaybaarka tijaabada ee horumarsan si loo hubiyo in alaabtu ay tayo leedahay oo ay hagaajiso awooddeena hal-abuurnimo. Tayada iyo Badbaadadu waa nafta badeecadaheena.
(2) Adeegyo heer sare ah
Sanado badan oo khibrad wax soo saar ah iyo ganacsi dhoofinta hodanka ah ayaa naga caawinaya inaan aasaasno koox adeeg iibineed oo si wanaagsan u tababaran dhammaan macaamiisha.
(3) Gaarsiinta Degdega ah
Awood soo saar xoog leh si loo qanciyo waqtiga hogaaminta degdegga ah. Waa qiyaastii 15-25 maalmood oo shaqo kadib markaan helno lacagta. Way ku kala duwan tahay iyadoo loo eegayo alaabada iyo tirada kala duwan.
(4) OEM ODM iyo MOQ
Kooxda R & D ee xoogan ee soosaarida alaabada cusub ee degdega ah, waxaan soo dhaweyneynaa OEM, ODM oo aan u habeynaa dalabka dalabka. Haddii aad ka dooraneyso shey hadda jira buugyarahayaga ama aad raadineyso kaalmada injineernimada dalabkaaga. Waxaad nooga sheegi kartaa shuruudahaaga soo-saarista.
Caadi ahaan MOQ waa 100pcs halkii moodelba. Waxaan sidoo kale soo saarnaa OEM iyo ODM sida aad u baahan tahay. Waxaan horumarinaynaa wakiil caalami ah.
Ilaalinta Sare silikoon Rubber Post Composite ...
Danab High Koronto isku darka Electric Insu ...
Daad Shiinaha Product jumlada Cross Gacan I ...